Mogadishu Journal » QM oo xafiis cusub ka furaneysa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose
Mjournal : — War-saxaafadeed laga soo saaray xafiiska ergeyga gaar ah ee QM u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay ayaa lagu sheegay in dhawaan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose laga furayo xafiis cusub oo ay QM leedahay kaa oo loogu adeegi doono shacabka ku dhaqan gobollada Jubbooyinka.
Nicholas Kay waxaa uu tilmaamay in ay doonayaan sidii adeegyo shaqo ay u garsiin lahaayen shacabka ku dhaqan gobollada Jubbada Hoose Jubbada Dhexe iyo Gedo,ayna u caawiyaan dadka deegaanada ku dhaqan.
”QM waxaa ay dadaal dheeraad ah u gali doontaa sidii ay adeegyo kala duwan u gaarsiin laheyd shacabka ku dhaqan deegaannada gobollada Jubbooyinka iyo Gado, xafiisku waxaa uu noqon doonaa mid loogu adeegayo shacabka ku dhaqan deegaannada hoos taga maamulka Jubba,” ayuu yiri Nicholas Kay.
War-saxaafadeedka ayuu ku sheegay Mr Kay in ujeedadu tahay sidii ay gobollada dalka oo idil ugu ballaarin lahaayeen howlaha kala duwan iyo adeegyada QM si loogu baahiyo guud ahaanba dalka Soomaaliya.
”Qorshaha xiligaan ee nooga aadan gobollada Jubbada Hoose Jubbada Dhexe iyo Gado waxaa uu yahay inan gacan siino dadka goobaha jooga, waxana xafiis gaar ah ka furi doona magaaladda Kismaayo dhawaan halkaaso anuu ka bilaabi doono adegyadeena gacan qabasho”ayuu yiri Nicholas Kay.
Hadalka ergeyga gaar ah ee QM ayaa ku soo beegmaya xili dhawaan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya hishiis ku gaareen dowladda federaalka Soomaaliya iyo mas’uuliyiinta maamulka Jubba oo khilaaf dhinaca siyaasada ah oo ka dhax tagnaa.